दलान नेपाल : “विद्यालय खुल्दै छ भनेर व्यापक हल्लाखल्ला गर्नु पर्यो”
वृद्धवृद्धाहरु वा आमाबुबाको पुस्ताहरु खासगरी कस्तो मनोदशावाट गुज्रीरहहेको पाउनु भयो ?
- म आफनै कुरा तपाईलाई सुनाउछ नि । मेरो गाउको घर त्यो ईलाकाकै सबै भन्दा पुरानो छ । ११० बर्ष पुरानो घर हो । मेरो बुबा त्यही जन्मनु भयो, आमा त्यही भित्रिआईयो । हामीहरु त वाहिर डेरा लिएर बस्न थालेको वातावरणमा हुर्केका कारण हामीलाई केही पिर छैन । तर उहाहरुको मनोदशा हेर्दा लाग्छ, जन्मभुमि भन्ने चिज गज्जवको प्यारो हुदो रैछ । उहा हरु अहिले पनि त्यसकै चिन्ताले विक्षिप्त हुनु हुन्छ ।
गाउहरुको अवस्था हेर्दा तपाईको विचारमा मानिसहरु समान्य अवस्थामा फर्कन कती लाग्छ ?
- तत्कालै त कुनै म सम्भावना नै देख्निन । किनकी त्यता तिर अहिले हाम्रो निकायहरु काम नै सुरु गरेका छैन । अहिले सम्म त हामी गाउ गाउमा उद्धार र राहतको नाममा त्रिपाल नै पुयाउदा पुर्याउदै धौ धौ गरीरहेका छौ । एउटा गाउ कम से कम पांच छौ ओटा टोलीहरु एउटा विज्ञको साथमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मानिसहरु र गाउहरुलाई समान्य अवस्थामा फर्काउन ।
तपाई आफै याहाको एउटा उच्च माध्यमिक विद्यँलयको प्राधानाध्यापक हुनु हुन्छ, सरकार १ जेठ देखि विद्यँलय संचालन गर्नु पर्ने भनेका छन । तपाईलाई के लाग्छ, विद्याँलयहरु १ जेठ देखि संचालन होलान ?
- हेर्नुस १ जेठ देखि त कुनै पनि हालतमा विद्यँलयहरु संचालन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । गोरखाको कुरा गर्नु हुन्छ भने याहाका ९५ प्रतिशत विद्याँलय क्षतीग्रस्त छन । ५० प्रतिशत विद्याँलय त पुर्ण रुपमै ध्वस्त छन । वाकीका पनि काम लायक छैन । तर हामीले त्रिपाल मुनि पनि पठाउनका लागी पहिला त वातावरण बन्नु पर्यो । आजको् मितीमा भन्नु पर्दा विद्याँथी र शिक्षक दुवै विद्यालयको प्रारगंनमा छिर्न तयार छैन । पहिला त्इसको लागी वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो । आज कुनै अखवारमा ललीतपुरमा संचालन भईरहेको विद्यालयको वारेमा समाचार हेर्यौ । तर ललीतपुरको कुरा गोरखाको वारपाक र अन्य क्षेत्रमा लागू हुनै सक्दैन । याहा विद्यार्थीहरु स्कुल जाने मनस्थिती मै छैन भन्ने शिक्षकहरु त्यो वातावरण बनाउने अवस्थामै छैन । मेरै कुरा गर्नुस न, म आफनो पुरानो कुर्सीमा गएर बसेर विद्याँलय संचालन गर्न सक्ने मनस्थितीमा छैनौ ।
त्यसो भए पहिला वातावरण बनाउन चाही के के गर्नु पर्छ त ?
- हेर्नुस, अहिले सरकारले १ जेठ देखि विद्यालय संचालन गर्नु भनेर दिएको आदेश एकदम ठिक छ । यसलाई व्यापक हल्ला गर्नु पर्यो । यसले के हुन्छ भन्ने विथोलिएको मानसिकतालाई सहज बनाउन काम गर्छ । ठिक छ, १ जेठ देखि संचालन नहोला तर अब स्कुल लाग्यौ है भन्न थाले पछि विद्याँर्थीहरु शिक्षकहरु पनि पनि विस्तारै मनोवैज्ञानिक रुपमा सहज वातावरण महसुस गर्न त थाल्लान नि । त्यस पछि १ अषाढ नै पढाई हो्स वा त्यो पछि नै तर त्यसको वातावरण बनाउन पनि अब हल्लाखल्ला गर्नै पर्छ । यसले समाजलाई पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा सहज वनाउदै लान्छन ।